OS X 10.12 dia mety ho ny sambo izay mitondra an'i Siri amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Una vez más, Mark Gurman te-hanala ny fototry ny tamba-jotra ary izy dia nitory izay heveriny fa havoaka amin'ny fahatongavan'ilay OS X 10.12 vaovao. Raha tsy fantatrao hoe iza i Mark Gurman, afaka milaza aminao izahay fa tonian-dahatsoratr'i California 21 taona izy ary tompon'andraikitra tamin'ny ankamaroan'ny vaovao manokana momba an'i Apple, izay nahatonga azy ho olona ambony.
Izao araka ny hitantsika ao amin'ny kaonty Twitter-nao, manome antoka fa ny kinova OS X, 10.12 manaraka dia ho avy amin'ny tanan'i Siri, ny feo mpanampy izay efa nanomboka tamin'ny iDevices sy Apple TV 4 nefa mbola tsy nanao ny dian'ny Mac izao tontolo izao.
Araka ny fantatrao, Apple dia efa niasa tamin'ny OS X 10.12 nandritra ny fotoana ela na dia mbola tsy navotsotra aza izy io tsy ny andiany 10.11.4 aza an'ny kinova ankehitriny. Ireo injenieran'ny rindrambaiko dia eo alohan'izay lavitra eny an-dalambe foana amin'ny fotoana rehetra ary izany no ahafantarantsika fa manolotra zavatra ny orinasan'ity kaliber ity. na amin'ny rindrambaiko na amin'ny fitaovana, dia efa niasa tamin'ny kinova na maodely manaraka izy efa ela.
Amin'ity tranga ity, nanantitrantitra ilay guru Mark Gurman fa ho tonga amin'ny OS X ihany i Siri amin'ny farany amin'ny Macs. Hoy izy:
Siri dia azo alefa amin'ny tsindry totozy avy eo amin'ny baran'ny menio, amin'ny fampiasana bokotra vaovao izay ho eo akaikin'ny Spotlight.
Toa ny mpanampy Siri dia azo alamina amin'ny singa vaovao ao amin'ny tontonana System Preferensi ary koa amin'ny fizotran'ny fikirakirana voalohany an'ny Mac, mba hahafahan'ny rafitra mamantatra ny feontsika.
Farany, afaka milaza aminao izahay fa nilaza koa izy:
OS X 10.12 dia hifantoka amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny rafitra toy ny amin'ny OS X El Capitan.
Ho hitantsika eo na tsia ireo faminaniana ireo amin'ny WWDC 2016 manaraka amin'ny Jona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » OS X 10.12 dia mety ho ny sambo izay mitondra an'i Siri amin'ny Macs
Rebeca Cancelo Bermúdez dia hoy izy:
Valiny tamin'i Rebeca Cancelo Bermúdez
Manantena koa izahay fa ho tonga amin'ny OS X. ny Siri anay, misaotra tamin'ny famakiana an'i Rebeca!
Inona no vaovao amin'ny Apple TV an'ny taranaka fahefatra tsy mila fanavaozana